अदृश्य फोल्डरमा अनुप्रयोगहरू कसरी लुकाउने आईफोन समाचार
अदृश्य फोल्डरमा अनुप्रयोगहरू कसरी लुकाउने जेलब्रेक बिना
के तपाईंसँग अनुप्रयोगहरू वा सर्टकटहरू छन् जुन तपाईं कसैलाई हेर्न चाहनुहुन्न? म कसैलाई पनि मेरो आईफोनलाई नछोउनको पक्षमा छु तर, यदि तपाईं मभन्दा फरक हुनुहुन्छ र केही अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईं कसैलाई पनि तपाईंसँग नभएको थाहा होस्, तपाईं तिनीहरूलाई अदृश्य फोल्डरमा लुकाउन सक्नुहुनेछ, र सब भन्दा उत्तम, यो यो आवश्यक छैन कि तपाईंको आईफोन, आईपड वा आईप्याड जेलब्रोन भएको छ। तपाईंले वालपेपर परिवर्तन गरेर केही सौंदर्यशास्त्र त्याग गर्नुपर्दछ, तर यो सबै हुन सक्दैन। अर्को हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं यो अदृश्य फोल्डर कसरी बनाउने.
1 अदृश्य फोल्डरमा कसरी अनुप्रयोगहरू लुकाउने
1.1 हामी वालपेपर परिवर्तन गर्दछौं
1.2 हामी पारदर्शिता परिवर्तन गर्दछौं
1.3 हामी एक अदृश्य आइकन सिर्जना गर्दछौं
1.4 हामी फोल्डरलाई खाली नामको साथ नाम दिन्छौं।
1.5 अदृश्य फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्
अदृश्य फोल्डरमा कसरी अनुप्रयोगहरू लुकाउने
यो ट्रिक हामीबाट आउँदछ ग्याजेट ह्याक्स र तपाईं निम्न भिडियोमा परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पछि तपाईसँग पछ्याउनको लागि चरणहरू छन्।
हामी वालपेपर परिवर्तन गर्दछौं
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो चीज भनेको वालपेपर प्रयोग गर्नु हो जसमा फोल्डर छुट्याउन सकिँदैन। परिवर्तन गर्न पृष्ठभूमि हो होम स्क्रिनमा एक मात्र, त्यसैले हामी लक स्क्रिनमा चाहेको छवि छोड्न सक्छौं। हामी निम्न कोषहरू मध्ये एक प्रयोग गर्नेछौं:
अर्को, हामी सेटि /् / वालपेपर / अर्को पृष्ठभूमि चयन गर्न, हामी रिल जाने र हामी डाउनलोड गरेको दुई मध्ये एक छान्छौं।
हामी पारदर्शिता परिवर्तन गर्दछौं
हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको सेटिंग्स / सामान्य / पहुँच / विस्तार कन्ट्रास्टमा जानुहोस्। यदि हामी खरानी पृष्ठभूमि प्रयोग गर्दैछौं भने हामीले पारदर्शिता कम गर्नुपर्नेछ। यदि हामी सेतो पृष्ठभूमि प्रयोग गर्छौं भने, हामीले मात्र विकल्प निष्क्रिय गर्नु पर्छ।
हामी एक अदृश्य आइकन सिर्जना गर्दछौं
अदृश्य आइकन सिर्जना गर्न हामीलाई फ्रि आइकन प्रतीक अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दछ जुन तपाईं अघिल्लो लिंकबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अदृश्य आइकन सिर्जना गर्न हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी सिर्जना आइकनमा ट्याप गर्दछौं।
हामी लिंकमा जानुहोस् मा छुन्छौं।
हामी फोटो विकल्प चयन गर्दछौं।
हामीले गृह स्क्रिनको पृष्ठभूमिको रूपमा सेट गरेको पृष्ठभूमि छनौट गरेर हामीले प्रयोगमा ट्याप गरेका छौं।
शीर्षमा यसले हामीलाई युआरएल राख्न अनुरोध गर्दछ; हामी स्पेस बार छुन्छौं।
हामी स्थापना मा ट्याप र फेरि स्थापना मा।
एप्लिकेसनले हामीलाई सफारीमा पठाउनेछ। हामीले भर्खरको घर स्क्रिनमा लिंक थप्नु पर्छ।
हामी लि point्कलाई पोइन्टको साथ नाममा राख्छौं र Add मा छुनुहोस्। हामीसँग होम स्क्रिनमा एक अदृश्य प्रतिमा हुनेछ।
हामी फोल्डरलाई खाली नामको साथ नाम दिन्छौं।
एक फोल्डरको नाम मेटाउन, केवल खाली स्थान प्रतिलिपि गरौं यी कोष्ठक बीचमा के छ [⠀⠀⠀⠀⠀⠀] र फोल्डर छाउनीमा राख्नुहोस्।
अदृश्य फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्
हामीले गर्नुपर्ने अन्तिम कुरा भनेको लि screen्क राख्नु जुन हामीले होम स्क्रिनमा सिर्जना गरेका फोल्डरमा छ। मा पहिलो पृष्ठ फोल्डरबाट यो केवल अदृश्य आईकन हुनु पर्छ र हामीले लुकाउन चाहेका सबै चीजहरू दोस्रो पृष्ठबाट हामी राख्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » अदृश्य फोल्डरमा अनुप्रयोगहरू कसरी लुकाउने जेलब्रेक बिना
के त्यो मेरो उबर हो? कुनै गडबड छैन, सवारीहरूमा नयाँ एलईडीको साथ
मन्दिर रन २ ले फ्रोजन छाया विस्तार विस्तार गर्दछ